အလှဓါတျပုံရိုကျတဲ့အခါ မှတျသားဖှယျရာလေးမြား - Latest Myanmar News
Camera စကိုငျပွီး ဓာတျပုံစတငျပွီး ရိုကျကူးမညျ့ သူမြားအတှကျ မှတျသားဖှယျ အခကျြ (25) ခကျြ
ပေးခငျြတဲ့ Message နဲ့ ရိုကျခငျြတဲ့ Subject ကဘာလဲ မွငျသာပါစေ။
2) ကွညျ့သူက Subject ကိုမပွောပဲသိပါစေ။
Subject ကိုမွငျသာအောငျ ကှဲပွားတဲ့ အရောငျ၊ အလငျးအမှောငျ၊ အခှငျ့သာရငျ Framing လုပျပွီးတော့ ပျေါလှငျအောငျရိုကျပေးပါ။
ပုံကိုအထောကျအပံ့မဖွဈဘူးထငျတာမှနျသမြှ ဖယျထုတျလိုကျပါ. မလှယျရငျ Ponint of View ပွောငျး၊
5) Negative Space အမြားကွီးမပါဝငျပါစေ။
ပုံအတှကျအထောကျအပံ့ဖွဈမှ အကြိုးရှိစှာအသုံးခတြတျမှ NS ကိုသုံးပါ။ မလိုအပျပဲမြားနရေငျမကောငျးပါဘူး။
6) Subject နဲ့ပုံကိုအပွညျ့ဖွညျ့ထားပါ။
ဓာတျပုံရိုကျခငျြဇောနဲ့ Subject ကိုပဲအာရုံရောကျပွီး ဘေးတှမေကွညျ့မိဖွဈတတျပါတယျ။Crop လုပျလို့ရတယျဆိုပမေယျ့ Pixel တှဆေုံးရှုံးပါတယျ။မလိုတာတှမေပါပါစနေဲ့။
9) အမွငျအမြိုးမြိုးက ကွညျ့ပါ။
အပျေါကိုမော့ရိုကျတာဟာ Subject ကိုကွီးကယျြခမျးနားစသေလို၊ ငုံ့ရိုကျတာဟာ သေးသှားစပေါတယျ။
10) မဖွဈမနေ Rule of Third။
ကငျမရာမှာ Grid Line ဖှငျ့ရိုကျလိုကျရငျပျေါလာတဲ့လိုငျးတှအေတှငျး Subject က One Third Area ထဲဝငျနဖေို့လိုတာကိုပွောတာပါ။
Portrait ရိုကျပွီဆိုရငျအရေးကွီးတာ မကျြလုံးက Center Horizontal Line အပျေါမှာပဲရှိနဖေို့လိုပါတယျ။ Subject ရဲ့ခေါငျးပျေါမှာ နရောတှအေမြားကွီးလှတျနတောကိုလဲဖွရှေငျးပွီးသားဖွဈမှာပါ။
12) Balance ကိုမမပေ့ါနဲ့။
Subject ကိုအဓိကထားဖို့ပွောပမေယျ့ အမွဲတမျးသူ့ခညျြးအဆငျမပွတေတျပါဘူး။ Main Subject ကိုအားဖွညျ့ပေးဖို့လိုသလို ပုံတဈပုံ တဈဘကျစောငျးနငျးမဖွဈစဖေို့ Balance လုပျပေးရပါတယျ။ တဈခါတဈရံ Secondary Subject နဲ့ တဈခါတဈရံ အလငျးအမှောငျနဲ့ထိနျးပေးရပါတယျ။
လူတိုငျးရဲ့မကျြလုံးကအလငျးနဲ့အလုပျလုပျတာဆိုတော့ ပုံတဈပုံကွညျ့ရငျလညျးအလငျးဆုံးနရောကို ထားကွညျ့တတျပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ Subject နဲ့ Message ကလငျးနဖေို့လိုမယျထငျပါတယျ။
14) DOF ကိုမြားသငျ့တဲ့အခါမြားပေးပါ။
15) ထောငျလိုကျ၊ လှဲလိုကျ။
တိုကျတှေ၊ အလံတှေ၊ ခဲတံတှနေဲ့ ဒေါငျလိုကျအရာတှအေတှကျ Vertical Shot ၊ ကယျြပွနျ့တဲ့ခံစား ခကျြတှအေတှကျ Horizontal Shot
16) Pattern တှကေိုအသုံးခပြါ။
ဆငျ့ကဲ ဆငျ့ကဲ ပုံစံတှေ၊ အကှကျတှေ၊ လိုငျးအထပျထပျတှကေ ပုံတှကေိုပို ဆှဲဆောငျစပေါတယျ။
17) Leading Line ကိုလညျးမမပေ့ါနဲ့။
ပုံတဈပုံမှာပါတဲ့လိုငျးတှဟော မိမိ Subject ဆီကိုကွညျ့သူရဲ့ မကျြစိအား အရောကျပို့ပေးနိုငျပါတယျ။
18) S ကှမေ့ဉျြးတှကေလဲအထောကျအပံ့ပါ။
ကားလမျး၊ စမျးခြောငျး၊ မွဈတှလေို အကှအေ့ကောကျကလေးတှဟော Composition မှာ နရောတျော တျောမြားမြားအသုံးဝငျပါတယျ။
ကလေးတှေ၊ ခှေးတှေ၊ ကွောငျတှကေို ရိုကျမယျဆိုရငျ သူတို့အရပျအနိမျ့အမွငျ့အတိုငျး ရိုကျသူက ထိုငျပွီးဖွဈဖွဈ၊ လှဲပွီးဖွဈဖွဈရိုကျပါ။ စီးမိုးပွီးရိုကျတဲ့ပုံမြိုးကို တတျနိုငျသလောကျရှောငျပါ။
20) Subject မြားကှဲပွားရှငျးလငျးပါစေ။
21) အလယျမကြ တကြ အကွောငျးရငျး ခိုငျခိုငျလုံလုံမရှိဘဲ (သို့) Symmetry ဖွဈဖို့မလိုဘဲ Subject ကိုအလယျမှာ ဘယျတော့မှမထားလိုကျပါနဲ့။
22) နောကျထပျအလယျတဈခု။Subject ကိုမှမဟုတျပါဘူး၊ Reflection လိုမြိုးမဟုတျရငျ (ဒါလညျး Symmetry တဈမြိုးပါပဲ) Horizontal Line ကိုပုံရဲ့အလယျခေါငျမှာ ဖွတျသှားတာမြိုးကိုရှောငျပါ။
23) ခေါငျးမဖွတျပါနဲ့။Horizontal Line ကသကျရှိ Subject တှရေဲ့ ခေါငျးကနဖွေတျသှားမြိုးကိုလညျး အထူးဂရုပွုရှောငျပါ။
တဈခါတလေ Horizontal Line နဲ့ပုံရဲ့အဓိကကတြဲ့ ပစ်စညျးတဈခုခုရဲ့ လိုငျးနဲ့တဈထပျတညျးကတြာ မြိုးတှရှေိတတျပါတယျ။ အဲဒီ့အခါမှာ ပစ်စညျးရဲ့အရေးပါမှုပြောကျကှယျသှားစတေဲ့အတှကျ Horizontal Line နဲ့ Subject တှရေဲ့လိုငျး တဈထပျတညျးကတြာမြိုးကို ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
25) ရပျ၊ ကွညျ့၊ ရိုကျ။
မရိုကျခငျက ဘကျပေါငျးစုံကကွညျ့ပါ။ ထကျအောကျစုံစအေ့ောငျကွညျ့ပွီးမှပါစခေငျြတာအကုနျ ပါလာစဖေို့ မပါစခေငျြတာတှေ ဘာမှမပါလာစဖေို့လို့ပါ။
Camera စကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံစတင်ပြီး ရိုက်ကူးမည့် သူများအတွက် မှတ်သားဖွယ် အချက် (25) ချက်
ပေးချင်တဲ့ Message နဲ့ ရိုက်ချင်တဲ့ Subject ကဘာလဲ မြင်သာပါစေ။
2) ကြည့်သူက Subject ကိုမပြောပဲသိပါစေ။
Subject ကိုမြင်သာအောင် ကွဲပြားတဲ့ အရောင်၊ အလင်းအမှောင်၊ အခွင့်သာရင် Framing လုပ်ပြီးတော့ ပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ပေးပါ။
ပုံကိုအထောက်အပံ့မဖြစ်ဘူးထင်တာမှန်သမျှ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ. မလွယ်ရင် Ponint of View ပြောင်း၊
5) Negative Space အများကြီးမပါဝင်ပါစေ။
ပုံအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မှ အကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်မှ NS ကိုသုံးပါ။ မလိုအပ်ပဲများနေရင်မကောင်းပါဘူး။
6) Subject နဲ့ပုံကိုအပြည့်ဖြည့်ထားပါ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ဇောနဲ့ Subject ကိုပဲအာရုံရောက်ပြီး ဘေးတွေမကြည့်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။Crop လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် Pixel တွေဆုံးရှုံးပါတယ်။မလိုတာတွေမပါပါစေနဲ့။
9) အမြင်အမျိုးမျိုးက ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကိုမော့ရိုက်တာဟာ Subject ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစေသလို၊ ငုံ့ရိုက်တာဟာ သေးသွားစေပါတယ်။
10) မဖြစ်မနေ Rule of Third။
ကင်မရာမှာ Grid Line ဖွင့်ရိုက်လိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့လိုင်းတွေအတွင်း Subject က One Third Area ထဲဝင်နေဖို့လိုတာကိုပြောတာပါ။
Portrait ရိုက်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးတာ မျက်လုံးက Center Horizontal Line အပေါ်မှာပဲရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ Subject ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ နေရာတွေအများကြီးလွတ်နေတာကိုလဲဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
12) Balance ကိုမမေ့ပါနဲ့။
Subject ကိုအဓိကထားဖို့ပြောပေမယ့် အမြဲတမ်းသူ့ချည်းအဆင်မပြေတတ်ပါဘူး။ Main Subject ကိုအားဖြည့်ပေးဖို့လိုသလို ပုံတစ်ပုံ တစ်ဘက်စောင်းနင်းမဖြစ်စေဖို့ Balance လုပ်ပေးရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ Secondary Subject နဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ အလင်းအမှောင်နဲ့ထိန်းပေးရပါတယ်။
လူတိုင်းရဲ့မျက်လုံးကအလင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ ပုံတစ်ပုံကြည့်ရင်လည်းအလင်းဆုံးနေရာကို ထားကြည့်တတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် Subject နဲ့ Message ကလင်းနေဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
14) DOF ကိုများသင့်တဲ့အခါများပေးပါ။
15) ထောင်လိုက်၊ လှဲလိုက်။
တိုက်တွေ၊ အလံတွေ၊ ခဲတံတွေနဲ့ ဒေါင်လိုက်အရာတွေအတွက် Vertical Shot ၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ခံစား ချက်တွေအတွက် Horizontal Shot
16) Pattern တွေကိုအသုံးချပါ။
ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ပုံစံတွေ၊ အကွက်တွေ၊ လိုင်းအထပ်ထပ်တွေက ပုံတွေကိုပို ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။
17) Leading Line ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။
ပုံတစ်ပုံမှာပါတဲ့လိုင်းတွေဟာ မိမိ Subject ဆီကိုကြည့်သူရဲ့ မျက်စိအား အရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
18) S ကွေ့မျဉ်းတွေကလဲအထောက်အပံ့ပါ။
ကားလမ်း၊ စမ်းချောင်း၊ မြစ်တွေလို အကွေ့အကောက်ကလေးတွေဟာ Composition မှာ နေရာတော် တော်များများအသုံးဝင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ၊ ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့အရပ်အနိမ့်အမြင့်အတိုင်း ရိုက်သူက ထိုင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ လှဲပြီးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ပါ။ စီးမိုးပြီးရိုက်တဲ့ပုံမျိုးကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။
20) Subject များကွဲပြားရှင်းလင်းပါစေ။
21) အလယ်မကျ တကျ အကြောင်းရင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲ (သို့) Symmetry ဖြစ်ဖို့မလိုဘဲ Subject ကိုအလယ်မှာ ဘယ်တော့မှမထားလိုက်ပါနဲ့။
22) နောက်ထပ်အလယ်တစ်ခု။Subject ကိုမှမဟုတ်ပါဘူး၊ Reflection လိုမျိုးမဟုတ်ရင် (ဒါလည်း Symmetry တစ်မျိုးပါပဲ) Horizontal Line ကိုပုံရဲ့အလယ်ခေါင်မှာ ဖြတ်သွားတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။
23) ခေါင်းမဖြတ်ပါနဲ့။Horizontal Line ကသက်ရှိ Subject တွေရဲ့ ခေါင်းကနေဖြတ်သွားမျိုးကိုလည်း အထူးဂရုပြုရှောင်ပါ။
တစ်ခါတလေ Horizontal Line နဲ့ပုံရဲ့အဓိကကျတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုရဲ့ လိုင်းနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျတာ မျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အခါမှာ ပစ္စည်းရဲ့အရေးပါမှုပျောက်ကွယ်သွားစေတဲ့အတွက် Horizontal Line နဲ့ Subject တွေရဲ့လိုင်း တစ်ထပ်တည်းကျတာမျိုးကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
25) ရပ်၊ ကြည့်၊ ရိုက်။
မရိုက်ခင်က ဘက်ပေါင်းစုံကကြည့်ပါ။ ထက်အောက်စုံစေ့အောင်ကြည့်ပြီးမှပါစေချင်တာအကုန် ပါလာစေဖို့ မပါစေချင်တာတွေ ဘာမှမပါလာစေဖို့လို့ပါ။